Nanao Ny Asany Tsy Nieritreretany Ny Fifehezan’ny Antoko Kaominista Mihitsy Ilay Shinoa Mpanazatra Volley-ball, Lang Ping · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Aogositra 2016 1:53 GMT
Lang Ping, mpanazatra ireo Shinoa vehivavy mpilalao volley-ball. Dikasary avy tamin'ny CCTV.
Roa ambinifolo taorian'ny nahazoany medaly volamena farany, nahazo volamena indray ny ekipa Shinoa vehivavy mpilalao volley-ball tamin'ny Lalao Olaimpika Rio 2016 ny 20 Aogositra teo, tamin'ny isa 3-1, nanoloana an'i Serbia. Mahalala tsara ireo mpankafy lalao volley-ball fa noho i Lang Ping, mpanazatra ny ekipa, no tena nandresen'ny ekipa.
Nampalaza ny tenany i Lang tamin'ny fialàny lavitra ny politikan'ny Antoko Kaominista Shinoa amin'ny resaka fanatanjahantena, ary nanao ny làlany samirery tao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena. Nisy fotoana aza niampangan'ireo sariolona azy ho mpamadika tamin'ny nanazarany ny ekipa Amerikàna mpilalao volley-ball, tamin'ny nandresen'io farany io ny ekipa Shinoa tamin'ny Lalao Olaimpika Beijing 2008.
Olona mahery fon'ny firenena ilay “spiker” (mpikapoka ao anaty ekipa mpilalao volley) fahiny, 56 taona, tamin'ny taona 1980 noho ny nitondràny an'i Shina handrombaka anaram-boninahitra maro naneran-tany, nandresy ny ekipa mpilalao volley-ball-n'i Japana sy Kiobà. Lasa fanehoana fahaizana fiarahamiasan'ny ekipa ary fikirizana ilay solonanaran'i Lang hoe ilay “Iron Hammer”: ny fanahin'ireo vehivavy mpilalao volley-ball.
Taorian'ny fandresena tany Rio, nidera an'ilay fanahin'ny volley-ball vehivavy, niaraka tamin'ny fikirizan'ny ekipa sy ny tanjaka ara-toekaren'i Shina, ireo media rehetra teo an-toerana.
Nabaribary ihany koa ny fandraisan'i Lang anjara, fa zara raha mipoitra amin'ireo tatitra Shinoa kosa ny làlany manokana, indrindra ny fanapahany hevitra hiala ny firenena taorian'ny nialàny tsy hilalao intsony ny taona 1986. Ny anton'izany dia satria ny ankamaroan'ireo fanapahankeviny dia nojerena ho mampiseho tsy fitokiana amin'ny rafitra itantanan'ny Antoko Kaominista Shinoa ny fanatanjahantena.
Araka ny tsipihan’ilay mpanao gazety malaza, Gao Yu, ao amin'ny Twitter hoe:
Fiarahabana noho ny nahazoan'ny ekipa vehivavy mpilalao volley-ball Shinoa medaly volamena taorian'ny 12 taona. Sarotra ny maminavina ilay fandresena androany raha tsy nisy an'i Lang Ping. Mpanazatra ao anatin'ny malaza erantany izy ary Shinoa. Shinoa mahaleotena izy, izay naseho teo amin'ny sehatra fanatanjahantena iraisam-pirenena, tsy sariolona ao anatin'ny milin'ny rafitry ny fanatanjahan-tena an-databatry ny firenena izy.
Eny tokoa, mifanohitra amin'ireo ankehitriny izay ao anatin'ny tontolon'ny atletisma, izay nandrafitra ny asany tamin'ny naha-mpiasan'ny governemanta azy ao amin'ny Fitantanam-panjakana Ankapoben'ny Fanatanjahantena, nandà ny asa nomen'ny governemanta tao amin'ny biraon'ny fanatanjahantena i Lang taorian'ny nialàny tsy nilalao ny taona 1986, ary nandao ny firenena mba hianatra ny fitantanana ny fanatanjahantena tany amin'ny Anjerimanontolon'i New Mexico tany Etazonia.
Nifamatotra tamin'ilay raharaha nanala baràka miresaka kolikoly tamin'ny fanorenana toerana fiofànana volley-ball tany Hunan any atsimon'i Shina, ny taona 1984, ny fanapahankeviny. Nanampy ireo manampahefana teo an-toerana tamin'ny fangatahana famatsiambola tany amin'ny Kaomity Fandrindràna Ifoton'ny firenena i Lang. Nekena ilay famatsiambola, fa tsy nampiasa ilay vola tamin'ilay toerana fiofànana ireo manampahefana teo an-toerana, ary tafiditra tamin'ny fanadihadiana kolikoly izy avy eo, noho ireo zavatra nataon'ireo manampahefana ireo. Nilazalaza ny zavatra niainany izy tao anatin'ny filazalazaina ny momba azy (tamin'ny alalan'ny Mingjing News):
Tafalentika tao am-poko ary tsy mety voafafa iny raharaha iny. Toy izao ireo manampahefana sasany: mila mampita ny tenin'ireo hafa izy ireo na efa lasa mpiasan'ny governemanta aza. Na tsy miombon-kevitra aza izy ireo, tsy maintsy manaraka ny baikon'ireo hafa. Tsy afaka ho mpiasam-panjakana toy izany aho, tsy afaka ny hanaraka fotokevitra toy izany aho. Manana fo nofo sy fangorahana aho. Tsy afaka ho tomponandraiki-panjakana aho. Te-hianatra zavatra mivaingana aho, siantifika ary ilaina.
Tao anatin'ny 22 taona nanaovany ny asany naha-mpanazatra azy, nitondra ireo ekipanà volley-ball tany Azia (tafiditra amin'izany i Shina tao anelanelan'ny taona 1995 sy 1999), Eorôpa sy Etazonia izy, nanampy azy ireo handresy tamin'ny fifaninanana isam-paritra ary na ny fifanintsanana tompondaka erantany aza.
Fony izy nanomboka nanazatra ny ekipa mpilalao volley-ball Amerikana, ny taona 2005, ary nitondra azy ireo handresy ny ekipa Shinoa tamin'ny Lalao Olaimpika tany Beijing ny taona 2008, nantsoin'ireo sariolona “tia tanindrazana” tao amin'ny Aterineto hoe mpamadika izy.
Kanefa, tsy nanampy ny ekipa Shinoa mpilalao volley-ball hiverina hahazo ny tanjany akory ny vava ratsy natao an'i Lang. Ny taona 2012, tsy tafiditra tamin'ny lalao manasa-dàlana tany amin'ny Lalao Olaimpika tany Londona ny ekipa mpilalao volle-ball vehivavin'i Shina, ary nalahatry ny Federasiônan'ny Volley-ball Iraisam-pirenena tany amin'ny laharana fahadimy ny ekipa, ny taona 2013.
Mba hanavotana ilay ekipa, nanasa an'i Lang hanazatra azy indray ireo tomponandraiki-panjakana avy amin'ny biraom-panjakana misahana ny fanatanjahantena. Nanaiky ihany izy nony farany, tamin'ny fametrahana fepetra hoe tsy afaka miditriditra amin'ny fitantanana ny ekipa ireo manampahefana.
Taorian'ny nahalasa lohan'ny mpanazatra an'i Lang, nampiditra rà vaovao izy, nampakatra ireo mpilalao tanora ho amin'ireo toerana iankinan'ny ain-dehibe, nanofana ekipanà mpanazatra ary nanitatra ny ekipan'ny mpanohana, izay nahitàna ireo mpanofana sy mpitsabo. Mbola manandanja bebe kokoa noho izany, niala tamin'ilay fomba fikotranana fanao hatrizay efa hitovy amin'ny an'ny miaramila izy ary nandrisika ireo mpilalao hampivoatra ny maha-izy azy manokana eny ambony kianja.
Nihevitra i Gao Yu fa ny zava-nisy hoe noentin'i Lang tany amin'ny fiangonana Bodista ny ekipa vehivavin'i Shina mpilalao volley-ball , nialoha ny Lalao Olaimpika dia mampiseho ny fomba nihaikàny ny ideolojian'ny antoko:
Tsara kokoa ny manome voninahitra ny Bodà noho ny manaraka ny fitsipi-pifehezan'ny antoko: nitondra ny ekipa tany “Mont Putuo” [any Shina] i Lang Ping sy ireo mpanazatra hafa, mba hanome voninahitra ireo andriamanitra Bodista. [hoy ireo hanihany amin'ny Aterineto hoe] te-hitsidika ny “Mont Putuo” ihany koa ireo ekipa lehilahy mpilalao baolina kitra ao Shina, saingy niteny ilay moanina hoe, “Miangavy anareo mba tsy hanao izay hanahirana ireo andriamanitra.” Ny volana Aogositra, nialoha ny nandehanan’ [ny ekipa mpilalao volley-ball vehivavy] tany amin'ny Lalao Olaimpika, nitsidika ny “Mont” indray izy ireo, ary nangatahany ireo moanina mba hivavaka ho azy ireo.
Mandeha amin'ny lalindalina kokoa amin'ny tantara ireo media Shinoa hoe angano mifanaraka amin'ny fitiavan-tanindrazana ny fandresena Olaimpikan'ny ekipa vehivavy mpilalao volley-ball tamin'ny alalan'i Lang. Fa raha i Lang no endrika hita vatana amin'ny fanahin'ny volley-ball vehivavy, mety ho fanombohan'ny tantaran'ny fandresena ny fahazoan'ny ekipa ny medaly volamena, tsy ho an'ny fandaharanasan'ny fanatanjahantena tantanan'ny fanjakana akory, fa ho an'ny fampisehoana ny maha-izy ny tsirairay sy ny fahaiza-mamorona ho fanatratrarana ny tsara indrindra.
6 ora izaySingapaoro